सरकार अपराधशाला बन्दै गएको छ
दण्डहीनताको डढेलोले देश खरानी हुँदैछ । पद्धति लोकतन्त्र छ, शासन र प्रशासनमा अपराधमात्रै देखिन्छ । जनप्रतिनिधि छन्, ९० प्रतिशत अपराधको ग्रहण परेका छन् । संविधान छ, दण्डित गर्न सक्दैन । अदालत छ, अपराध र अपराधीको संरक्षण गर्छ । सामाजिक मूल्य, मान्यता र मानवीय संवेदनशीलता मारेर बहादुर हुनसकिने अपराधी संस्कृति संस्थागत हुनथालेको छ । उत्तम व्यवस्थामा खत्तम संस्कार, यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नु र मान्नु लज्जास्पद छ ।
तर कसैले लज्जाबोध गर्दैनन् । मानौं सत्ता र शक्तिशालीहरु इम्परर न्यू क्लोथ कथाका बादशाह हुन् र बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु बादशाहका जयजयकार ध्वनीका साथ आरती उतार्ने चाकरीदार झुण्ड हुन् । बादशाह नाङ्गै छन् भनेर सत्य बोलिदिने बालबालिकाहरु बलात्कार र हत्याका सिकार बनिरहेछछन् । नेपाल अन्ध–नगरी बनेको छ । चाणक्यकालका धनानन्दको अत्याचार आधुनिक नयाँ नेपालमा देखिन थालेका छन् । धनानन्दकोजस्तो अत्याचारी शासनको अन्त्य गर्ने चाणक्य र चन्द्रगुप्त मौर्य जन्मने छेउछन्द छैन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलकै जिल्लामा प्रहरी जमातले प्रहरी सुन्तली धामीको इज्जत लुटेका थिए । ख्याती श्रेष्ठजस्ता बालिकालाई टुक्रा टुक्रा पारेर मारियो र बोरामा हालेर चितवन, ललितपुर र काठमाडौंमा फालियो । कतिपय बालकहरु पनि अपहरणपछि मारिएका थिए । अपराधी शिक्षक निस्किए । जमिम शाह, फैजान अहमद, अरुण सिंहानियाहरु पनि दिउँसै मारिए । कसले मा¥यो पत्तै लागेन । मदन भण्डारीको हत्यारा थाहा छ भन्ने व्यक्तिहरु सत्तामा छन्, मदन भण्डारीकै श्रीमती राष्ट्रपति छिन्, त्यो रहस्य खोतल्दैनन् । पार्टीको दराजमा दुर्घटना हो भन्ने रिपोर्ट थन्क्याएर बसेका छन् । दरवार हत्याकाण्डका एकमात्र ज्यूँदा व्यक्ति गोरखा शमशेरसँग बुझ्न सरकार तातेको चर्चा छ । यो तातो आफ्नो असफलता लुकाउने तरिकामात्र हो भन्छन् विश्लेषकहरु । यी सब देखेका एक बृद्ध नागरिकले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए– थुइक्क नेता हो, कति खान्छौ मान्छेको बली ? शान्तिसँग बाँच्न पनि पाइएन । यो नागरिक आक्रोस आततायी सिंगो जनयुद्धको जमात शान्तिमार्ग हुँदै सत्तामा पुगेपछिको घटना थियो । त्यसमा घ्यू थपिन थालेका छन् ।
विहारमा नितिस कुमारको उदय हुनुपूर्व यस्तै थियो । धम्क्याउने, अपहरण गर्ने अनि मार्ने । नेपालदेखि विहारसम्म यस्तै थियो । नितिसकुमारले इन्काउण्टरको यस्तो चक्कर चलाए, मानवाधिकारवादीको आँखामा भोगेटेको चस्मा लगाइदिएर गुण्डाराजको अन्त गरिदिए । विदेशीलाई यति धेरै सुविधा दिए कि चीनका कतिपय मल्टिनेशनल कम्पनीसमेत विहारमा उद्योग खोल्न पुगेका छन् । लालुकालको कालो विहार परिवर्तन भएर नितिशकालको उज्यालो विहार बनिसक्यो । अपराधको मात्रा स्वात्तै घटेको छ ।
केहीवर्ष अघि युनाइटेड एकेडेमीका प्रिन्सिपल दीप चाम्लिङ्की छोरीलाई दुई करोड फिरौती तिरेर छुटाइएयो । व्यापारी रवीन्द्रलाल श्रेष्ठले अपहरणबाट मुक्त हुन दुई करोड बुझाए । बीएण्डबी अस्पतालका डाक्टर जगदीश वैद्यले अपहरणमा परेका छोरालाई चार करोड तिरेर छुटाएको समाचार अहिले पनि नेपाल प्रहरीको रेकर्डमा पढ्न सकिन्छ । अपहरणको डरलाग्दो काण्ड डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाकी छोरीमाथि पनि घटेको थियो । पछिल्लोपटक एक मारवाडी चार करोड तिरेर छुटेका छन् । वीरगञ्जमा औषधि व्यापारी आठ लाख बुझाएर पनि मारिए । जमिम शाह, फैजान अहमद र अरुणको वीचबजारमा हत्या भएपछि विहारको आतङ्कवादी रोग नेपालमा फैलिएकोमा शंका भएन । यो अपराधको माहामारी देशैभरि फैलिएको छ । कि नातामा पर्नुप¥यो, कि ५ देखि १० करोड बुझाउनु प¥यो, सांसददेखि संवैधानिक पदमा नियुक्ती पाइन्छ, कि अत्याचार सहनुको बिकल्प रहेन ।
राजनीतिक परिवर्तन त भयो, राजनीतिमा शुद्धिकरण र प्रशासनमा निर्मलीकरण हुनसकेन । राजनीति र प्रशासन अपराधीको अड्डा बनेपछि संसद, सरकार र नीतिनिर्माण सबै अपवित्र हुनु स्वभाविक हो । मूल फोहर भएपछि बहाव फोहर नै हुन्छ । नेपालमा बढेको यो राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधीको प्रशासनिकरण सुनपानी छर्केर वा गौदान गरेर चोखिने अवस्था छैन । जब कानुन व्यवस्थाका टाउकोदेखि पुच्छरसम्म भ्रष्टाचारिकरण, नैतिकहीनताकरण, जवाफहीनताकरण हुन्छ, तव अपराधीहरुले राजनीतिका माध्यमबाट सिंगो कानुनव्यवस्थालाई बिनष्ट पारिदिन्छन् । वर्तमान नेपालको अवस्था त्यही छ र असहाय नागरिक बिनष्टकारी अपराधीकरणको धुन्धुकारी परिणाम भोगिरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र पद्धति परिवर्तन दुर्गन्धमय बनेको छ ।
हाम्रा राजनीतिक नेता र पार्टी डन पाल्ने संस्कार विकास गरिरहेका छन् । जनतालाई कम र डनलाई बढी विश्वास गरेकै कारण यो पद्धतिमा गुण्डाराज चम्केको हो । पद, तक्मा, मानपदवीसमेत गुण्डा र भ्रष्टहरुले पाउन थालेपछि यो तोक र ठोकतन्त्र हो भन्न करैलाग्छ ।
डनको इतिबृतान्तका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा विश्वयुद्धपछि इटलीको सिसिलीबाट एउटा शरणार्थी परिवार अमेरिका पस्यो । अभिभावक थिए कन्र्योल । उपन्यासकार मारियो कुनोले डन कन्र्योलका बारेमा गड फादर भन्ने उपन्यासमा लेखेका छन्– कन्र्योल विश्वकै पहिलो डन हुन् ।
कन्र्यौल शरणार्थी थिए र उनलाई सबैले हेपेपछ उनी बाहुबली बनेका रहेछन् । हेप्ने धनाध्येहरुलाई ढुटो पार्छु भनेर कन्र्यौलले अभियान नै चलायो, प्रहरीको बन्दुकसमेत खोस्यो, लुटपाट मच्चायो । ग्याङ खडा ग¥यो, माफिया अपराधको साम्राज्य नै चलायो । डन बनेपछि कन्र्यौलले न्यूयोर्क सहर नै कब्जा ग¥यो । यो देखेर अन्य डन समूहहरु पनि जन्मिन पुगे । ग्याङ फाइट पनि हुनथाल्यो । पहिले डन कन्र्यौलको जेठो छोरो मारियो, एकदिन डन कन्र्यौल इन्काउण्टरमा परे र उनी पनि मारिए । मारिदा डन कन्र्यौलको मुहार ढलमा जोतिएको थियो ।
नेपालमा चरी, कुमार घैंटेजस्ता डनहरु इन्काउण्टरमा मारिएका छन् । पछिल्लो पटक नेकपाका कुमार पौडेललाई सर्लाहीको जंगलमा इन्काउन्टर गरिएपछि प्रहरी बदनाम हुनपुगेको छ । मानवाधिकार आयोगले इन्काउण्टर होइन भन्ने कुरो बाहिर ल्याएको छ । यद्यपि गणेश लामा, मेन्डिज, दीपक मनांगे, काजी शेर्पा, राजु गोर्खाली, मनराज गुरुङ, पूर्ण गुरुङ, तीर्थ लामाका नामहरु पत्रपत्रिकामा डन भनेर प्रचार गरिएका छन् । यी कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार नेपालमा २१ डन समूह कार्यरत छन् र तिनीहरु हरेक ठेक्कापट्टामा समेत लुट मच्चाइरहेका छन् । छोटे डन त कति छन् छन् । सरकार नै डन बनेर बिरोध गर्नेलाई अरिंगाल बनेर चिल्न थालेपछि अरु डनको के चर्चा गर्नुपर्ला र ?
डनको परिभाषा हेर्दा सिंगो नेकपाको सरकार नै डन हो कि भन्ने आशंका हुन्छ । कारण, सुन पक्राउ हुन्छ, पछि पित्तल भन्छन् । साँढे ३३ किलो सुन काण्ड भयो, सनम शाक्यसहितको हत्याकाण्डसमेत घट्यो, न अपराधी पक्राउ परे, न सुन नै पक्राउ प¥यो । गृहमन्त्री ३८ टन सुन एयरपोर्टबाट छिरेको बयान दिन्छन्, यसमा को को जिम्मेवार छन्, सरकार बोल्दैन । डनको अत्याचार त ७ सय ६१ सरकारमै व्याप्त छ । धनगडीमा डोजर चलाएर महिला, बृद्धमाथि डोजरले पेलेका दृश्यहरु यतिबेला टीभीमा देखाइएको छ । यो सरकारी डन आतंक होइन ?
नेकपाका दुई जना मन्त्री हरि पराजुली र शेरबहादुर तामाङ महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको बिबादमा मुछिए र पदबाट हटाइए । पछिल्लो डरलाग्दो घटना हो– सभामुख कृष्णबहादुर महराको बलात्कार काण्ड । अदालतले हत्यारा भनेको व्यक्ति बालकृष्ण ढुंगेल जेल परे, सरकारले नै माफी दियो । सांसद रेशम चौधरी ज्यानमारा मुद्दामा जेलमा छन् । रौतहटका सांसद मोहम्मद अफताव आलम बिसौं मान्छेलाई ज्यूँदै इटाभट्टामा पोल्ने आरोपमा पक्राउ परेका छन् । अर्का सांसद पार्वत गुरुङलाई पूर्जी काटिएको छ । भ्रष्टाचार र अपहरणमा मुछिएकाहरु अदालतबाट छुट्दा बाजागाजा, फूलमाला, जयजयकार गरेर स्वागत गर्ने यो मुलुकमा जनयुद्धका फौजदारी अभियोग लागेकाहरुको सत्य निरुपण र मेलमिलाप हुन नसक्नुले पीडितको ६३ हजार उजुरी अलपत्र परे पनि जिम्मेवार कसैलाई टाउको दुःखेको देखिदैन ।
यति नै बेला अदालतका न्यायाधीशहरु गलत फैसला र आदेश दिएकोमा हटाइएका छन् वा राजीनामा दिने क्रम सुरु भएको छ । राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधीको राजनीतिकरण, यही महामारीले उत्तम व्यवस्था मानिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई क्यान्सर बनाइरहेको छ । क्यान्सर क्रोनिक भयो भने अन्त्यमात्र बाँकी रहन्छ ।
यसकारण मलाई रोमन मार्क एन्टोनीको सम्झना आइरहेको छ ।
इतिहासमा मार्क एन्टोनी भन्ने एउटा जण्डो व्यक्तिको कुरा छ ।
मार्क एन्टोनी दुश्मनसँग लड्दै गर्दा दुश्मनसँग एउटा सिपाही डरायो वा दया लागेर मार्न चाहेन । यो देखेका मार्क एन्टोनीले लाटोकोसेरो सिपाहीको काम छैन देशका लागि भनेर म्यानबाट तरवार झिक्यो र आफ्नो सिपाहीको टाउको आफैले छपक्कै पारिदियो ।
यो घटना देखेका रोमन सिपाहीहरु यसरी जागे कि एन्टोनीले युद्ध घोषणा गरे कि उनकै जीत हुनथाल्यो । मानव हत्यारा बन्नु अघि चुनाव जितेर शासक बनेका हिटलर भन्थे– मलाई भीड चाहिन्न, भीडलाई नियन्त्रण गर्ने इमानदार र सूरो एउटा सिपाही चाहिन्छ ।
नेपालमा निरंकूशतासँग लडेर नयाँ नेपाल बनाउनेहरु ०६३ सालमा जनआन्दोलन जिते र समानता र न्यायपूर्ण समाजका दुश्मनहरुसँग लड्न सिंहदरवार पुगेका हुन् । यी लोकतन्त्रका लडाकाहरुले लोकतन्त्रमा यतिधेरै मानवीय दुश्मन उत्पन्न गराइदिए कि त्यो फोहरको डंगूरमा यी लडाकाहरु आफै लुटपुटिएका छन्, आफै फोहर बनेका छन् । यसकारण, वर्तमान नेपालमा राजनीति र प्रशासन आसुरी बनेको छ, पद्धतिमा भयानक मत्स्य न्याय पन्पिएको छ । लोकतन्त्रका बिजोग ।
यो पशु राजको अन्त र मानवीय शासनको सुरुआत गर्न एउटा एन्टोनी चाहियो चाहियो । देशघातकहरुको पञ्जाबाट स्वतन्त्र देशलाई सहीअर्थमा स्वाधीन बनाउन एउटा ज्यानमारा बन्नुअघिको लोकप्रिय हिटलर चाहिएको छ । एन्टोनीजस्ता देशभक्त सूरवीर चाहिएको छ । अर्थात जनताको कुरा सुन्ने, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने बेनिभोलेन्ट शासक नेपालको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको नाममा लोकमारा, ज्यानमारा, हिंस्रक शासकहरुबाट देश सकसमा छ । सकसबाट मुक्तिको आस, जनता खोजिरहेका छन् । विद्यासुन्दरजस्तो नामले होइन, बुद्धिमान र जनविश्वासले सुन्दर देशको मेयर चाहिएको छ ।
जनआन्दोलनको १९ दिन जनताले जागृत भएर साथ दिएका हुन्, ती नेताहरुले आफैलाई ढाँटेर शक्तिशाली बने, सत्ता र सम्पत्ति कमाए, जनविश्वास गुमाए । जनतालाई साथ लिएर हिड्नसक्ने जागृतिको ज्वालामुखी, ज्वारभाटा उत्पन्न गराउन सक्ने एकजना एन्टोनी नजन्मने हो भने नेपाल यस्तै हरिहल्लैबाट सकिने दिन टाढा छैन ।
जनता भनेका शोषणा गर्नैपर्ने, शोषित हुनैपर्ने जात होइन । जनताको रगत पसिना राजनीतिको सोमरस हुनसक्दैन । नेतृत्व जनताको मालिक होइन । यसकारण लोकतन्त्र दाउद शैलीको राजनीतिक अपराधिकरणको व्यापार गर्ने सुपर मार्केट बनेको छ, यो राष्ट्रिय रोग हो । यो ब्याधि निको पार्न एउटा जनभक्त, राष्ट्रभक्त एन्टोनी जन्मनै पर्छ । अपराधीकरणको अतिले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय जीवनलाई ऐंजेरुबाट बचाउनै पर्छ ।
जनता मुर्ख छैनन्, चेत छ, जानकार पनि छन् । तर, संगठित छैनन, सहनशीलताले तिनको आत्मालाई थिचिरहेको छ । सहनुको अर्को नाम नेपाली चरित्र हो । आफूले चिनेको, बनाएको शासकलाई यो के गरेको ? यही हो लोकतन्त्र भनेर सोध्नुपर्ने हो । तर जनता नबोल्दा नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई झिल्के मिल्के साइनबोर्डमा सिमित गराइदिएका छन् ।
सनयातसेनले चीनमा पाओ पत्रिकाका माध्यमबाट राष्ट्रवादको चेतना फैलाएको इतिहास छ । आज पार्टीका मुखपत्र बाहेकका अधिकांश पत्रपत्रिकाहरू अपराधिकरण, माफियाकरण, भ्रष्टिकरणको भण्डाफोर गर्दै राष्ट्रवाद, शान्तिसुरक्षा, विदेशी हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणका सम्बन्धमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् तर जननेताको पगरी गुथेका नेतृत्वपंक्ति परिवार र पैसाबादले आँखामा पट्टी बाँधेर, कानमा कपास कोचेर, नाक–मुखमा मास्क लगाएर स्वार्थ लुटिरहेको छ । जनता र देशप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने राजनीति अपराधिकरणको पीपपोखरी बनिसक्यो । सबैले बुझ्नै पर्ने सत्य के हो भने पार्थिव भावनाको मलामी गएर चिहानमा मात्र पुगिन्छ । यसैगरी जनतालाई सधैं मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताको टुकुचा नेतृत्वपंक्तिले पार नगर्ने हो भने यस्तो डन प्रवृत्तिको नेतृत्वले ढिलाचाँडो डन कन्र्यौलकै नियति भोग्नुपर्ने छ । जनताको आक्रोश बिस्तारै बढ्न थालेको छ । असंगठित जनतालाई संगठित गर्न कुनै सनयात सेन अथवा मार्क एन्टोनी निस्क्यो भने त्यो दिन महाभूकम्पभन्दा कम हुनेछैन परिवर्तनका लागि ।
प्रतिक्षा जनता उठ्ने दिनको छ । जनता जाग्छ, जाग्नैपर्छ ।प्रतिक्षा जनतालाई उठाउने नेतृत्वको छ । जनता उठ्छ, जरुर उठ्छ । छिटै उठ्छ ।
सम्पा लोकतन्त्रमाथि कम्युनिष्ट आक्रमण
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट सरकारले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोज्यो, यसका लागि प्रजातन्त्रवादी एकजुट भएर मुकाविला गर्न आह्वान गरेका छत् । यसको अर्थ राजनीति ध्रुविकरणतिर उन्मुख भएको र आउने समय अर्को द्वन्द्वमा फस्न लाग्यो भन्ने नै हो । कम्युनिष्टले चुनाव जितेका हुन् र चुनावी माध्यमबाट कम्युनिष्टलाई राज्य सञ्चालनको लोकादेश भएकै हो । लोकादेश निरंकूशतन्त्र चलाउन र प्रतिपक्षीहरुलाई प्रहार गर्नका लागि दिएको होइन । तर प्रतिपक्षीले प्रजातन्त्रमाथि कम्युनिष्टको प्रहारले खतरा बढ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् भने यो शुभसमाचार होइन ।
हो, लामो लडाइपछि लोकतन्त्र आयो । लोकतन्त्र आउनु भनेको नेतातन्त्र आउनु होइन । आज लोक कहाँ छन्, पार्टीहरु कुन स्थानमा ? लोकमाथि पार्टी हावी हुनु र पार्टीवालाहरु लोकको आवाज नसुनेर लोकमाथि भारी बनेका छन् भने यो पार्टीहरुको कमजोरी हो । पार्टी भनेको लोकका मालिक होइनन् । सेवक हुन् । लोकका सेवक हुन् भने लोकआवाज पार्टीवालाहरुले सुन्नैपर्छ । संवोधन गर्नैपर्छ र प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताको मान राख्नैपर्छ । पार्टीहरु संविधानमा बसे, यसको अपनत्व बढ्ने हो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सबैलाई आह्वान किन गरेको हो, सत्ताधारीले यसको विश्लेषण गरेर आत्ममिमांसा नगर्ने हो भने यसबाट गम्भीर परिणाम आउन सक्छ । सत्तासीनहरु कुनै पनि हालतमा अहंकारी बन्नु हुँदैन । अहंकार भनेको अँगार हो । पार्टीहरु जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले जिम्मेवार र जवाफदेहीता लिनैपर्छ । संविधानलाई जनपक्षीय बनाएर संविधानअनुसार सबैले अनुशासित रुपमा चल्नुपर्छ । अनुशासनहीनताले बिग्रह र बितण्डामात्र निम्त्याउने छ । चेतना भया ।